Malunga nathi - Jinan Apex Machinery Equipment Co., Ltd.
I-Jinan Apex Machinery Equipment Co., Ltd.yishishini elibanzi elizinikele ekwenzeni i-CNC umzila, umatshini we-laser ngomthi, i-PVC, ii-acrylics, isinyithi, ilitye, isikhumba njl njl ukusika okanye ukukrola ukusukela ngonyaka ka-2006, kwaye saqala ukwenza amazwe Ukurhweba ukusukela ngonyaka ka-2016. Iimveliso zithandwa kakhulu ekhaya nakumazwe aphesheya, iimarike eziphambili zigubungela iYurophu, uMantla kunye noMzantsi Melika, iAfrika, iAsia, amazwe amaninzi neendawo.
Bonke oomatshini be-CNC kufuneka bapase uhlolo olungqongqo ngaphambi kokuziswa, kunye nokuhanjiswa okuthe ngqo kokuthumela ngaphandle iipakeji, ezifanelekileyo ulwandle, umoya, okanye iindlela zokuhamba ngekhuriya. Iimveliso kufuneka zisebenzise i-CE, i-ISO, isatifikethi se-FDA ukuba abathengi bafuna njalo. Ifektri igubungela malunga ne-3000 yeemitha zesikwere, kubandakanya indawo eyahlukeneyo ye-R & D, kwiimveliso ezintsha ze-R & D, iimveliso zebakala zangaphambili zokuhlaziya, ezihambelana nesicelo somthengi se-OEM, i-ODM.
Kukho malunga ne-300 yeentonga, iingcali ezili-10 zobunjineli kunye neenjineli zobuchwephesha ezili-18 ezibandakanyiweyo, Emva kweminyaka yemizamo eqhubekayo kunye nabaxhasi bexhasa kude kube namhlanje, iphuhlise imodeli yenkqubo yokusebenza yoyilo, imveliso, urhwebo lwenkonzo yokumisa enye. Abathengi abatsha nabakhoyo bayasasazeka kuMzantsi Melika, kuMbindi Mpuma, mpuma Asia, eAfrika, eYurophu nakwezinye iiCommunity nakwiindawo.
Wamkelekile abahlobo kwihlabathi liphela beza kutyelela kwaye balindele ukuqhubeka kwenkxaso eqhubekayo nceda. Umatshini we-CNC womatshini abathengisi kunye nabasasazi bawo bayadingeka kwihlabathi ngokubanzi. Enkosi ngokudibanisa ne-imeyile, whatsapp, okanye umnxeba.
Jinan Apex Oomatshini Equipment Co., Ltd.
Sigxile ngokukodwa kumatshini wokukrola, kumatshini we-laser, kumatshini wokusika ifayibha ebonakalayo kunye nezinye iimveliso ezinxulumene noko,
Singumvelisi oqeqeshiweyo we-CNC woodworking lathe kunye nomatshini wokukrola. Siye sathengisa i-CNC lathes e-China ukusukela ngo-2009 nakwamanye amazwe ukusukela ngo-2013.
Umatshini wethu uneentlobo zonke zokuqinisekiswa komgangatho, sinemveliso yemveliso eqolileyo, inkqubo yolawulo lomgangatho opheleleyo kunye nesayensi, iqela lokuthengisa ngokugqwesileyo kunye neqela lenkonzo emva kokuthengisa.
Siyahambelana nefilosofi yeshishini "ethembekileyo kunye nepragmatic, yenza phambili" kwaye uye kwindlela yempumelelo ngenkonzo egqibeleleyo emva kokuthengisa.
Siye sathengisa i-CNC lathes e-China ukusukela ngo-2009 nakwamanye amazwe ukusukela ngo-2013. I-lathes yethu ithengisa kakuhle kwihlabathi liphela, njenge North America, Europe, Middle East kunye namanye amazwe.
Ukuza kuthi ga ngoku, oomatshini bethu badlulile CE, ISO kunye nokuqinisekiswa kweSGS. Sinemveliso yemveliso eqolileyo, inkqubo yolawulo lomgangatho opheleleyo kunye nesayensi, iqela lokuthengisa ngokugqwesileyo kunye neqela lenkonzo emva kokuthengisa.
Umthamo wonyaka wokuthumela ngaphandle
Isigidi se-yuan +